MAREYKANKA oo ka digay weerar ku wajahan Riyadh - Caasimada Online
Home Dunida MAREYKANKA oo ka digay weerar ku wajahan Riyadh
MAREYKANKA oo ka digay weerar ku wajahan Riyadh
Riyadh (Caasimada Online) – Saraakiisha Mareykanka ayaa ka digay weeraro lala beegsan karo magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga, xilli boqortooyada ay dhexda ka qabatay gantaallo iyo diyaarado drone ah oo ay soo direen kooxda Xuutiyiinta Yemen.
Xuutiyiinta xiriirka la leh Iran ayaa bilihii tegay sare u qaaday weerarada ay la beegsadaan Sacuudiga, gaar ahaan gobollada Koonfureed ee ku teedsan xuduudda Yemen.
Safaaradda Mareykanka ee Riyadh ayaa muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan caasimadda uga digtay “inay feejignaadaan oo ay qaataan taxaddarada lagama maarmaanka ah.”
“Safaaradda waxay isha ku haysa warbixino sheegaya gantaallo iyo diyaarado drone ah oo laga yaabo inay kusoo wajahan yihiin Riyadh,” ayaa lagu yiri qoraal ay safaaradda soo dhigtay website-keeda, ayada oo aan bixin wax faahfaahin ah.
Xuutiyiinta ayaa horey u beegsaday Riyadh ayaga oo adeegsanaya gantaallo iyo diyaarado drone ah, halka isbaheysiga Sacuudiga ee dagaalka Yemen ay sheegeen inay inta badan dhexda ka qabteen.
Riyadh ayaa 700 oo km waqooyi kaga beegan xuduudda Yemen.
Saacado kadib qoraalka safaaradda, isbaheysiga ayaa sheegay inay dhexda ka qabteen lix diyaarado drone ah oo ay ka buuxaan bamooyin kuwaasi oo ay soo direen Xuutiyiinta.
Lama shaacin bartilmaameedka diyaaradahaas.